Short Stories Archives - Page 8 of9- Safal Stories
Home Short Stories पृष्ठ 8
एकपटक कुनै व्यक्तिले प्रतिभावान भायोलिनवादक फ्रीट्ज क्रिस्लरसंग आफ्नो जिज्ञासा राखेछ,"तपाईं यति मनमोहक किसिमले भायोलिन कसरि बजाउनुहुन्छ ? के तपाईं भाग्यमानी भएकैले यसो गर्न सक्नुभएको...
दुई पटक आत्महत्याको प्रयास गरेका विश्वकै यी सफल निर्देशक तथा कलाकार
सन् २०११ मा फोर्ब्सले निकालेको सूचीमा थिएटरमा सबैभन्दा महंगा कलाकारमा आएका व्यक्ति हुन् , टेलर पेरि । उनको बाल्यकाल निकै नै पीडादायक थियो ।...
हारेर पनि विजयी बनेका थिए लरेन्स
लेमियुक्स ओलम्पिक डुंगा दौडका खेलाडी हुन् । १९८८ मा भएको खेलमा पनि उनी डुंगा दौड प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । उक्त प्रतियोगतामा उनी, अघिल्लो...
आफ्नो कामप्रतिको गर्व
कुनै ठाउँको बाटो नजिक, तीनजना कामदारहरु इँटाको गारो लगाउने काम गर्दै थिए । एकजना बटुवाले, " तिमीहरु के गर्दैछौ ?" भनि सोध्यो । पहिलोले...
महानताका स्तम्भ : सफलता र विनम्रता
धेरै वर्ष अघिको घटना हो । एकजना घोडसवार, केही सैनिकहरु काम गर्दै गरेको ठाउँमा आइपुगे । सैनिकहरु एउटा गह्रौं मुढोलाई किनारतिर पन्छाउने प्रयास गर्दै...
म्यारी केको सुरुवात र सफलता
अमेरिकी व्यवसायी म्यारी के एयासले घरघरमा गएर किताब बेच्ने काम गर्थिन् । त्यतिबेला उनका श्रीमान सेनामा काम गर्थे । श्रीमान सेनाबाट फ़र्किएपछि उनीहरुबीच सम्बन्ध...
एउटा बच्चाले चङ्गा उडाउँदै थियो । उडिरहेको चङ्गाले उसको मनमा एउटा प्रश्न उब्जायो । बच्चाले नजिकै रहेका आफ्ना बुवासंग सोध्यो, " बाबा ! के...
1...6788 पृष्ठ 8